story that made me cry?? - thegirlwholoveexoooo - Wattpad
story that made me cry??
#baekhyun #drama #chanyeol #mystery #romance
Dumb love affair
376K 36.6K 54
ဆွံ့အ နား မကြား ​ကျောင်း မှ... ​ကောင်​ ​လေး တ ​ယောက်​ ကို သနား စိတ်​ ဖြင့်​ ​မွေး စား ခဲ့ မိ ​သော်​ လည်း... တကယ်​ ချစ်​ မိ သွား ​သော ​ကောင်​ ​လေး...ခက်​ ထန်​ ငယ်​ စဉ်​ က တည်း က မ​ကြောင့်​ မကြ ​နေ ရ တာ ​ကြောင့်​ တမိ သား စု လုံး အ ​ပေါ် ဆိုး လွန်း သည့်​ ​ကောင်​ ​လေး ... လူ လူ ချင်း အတူ တူ ကိုပင်​ နှိမ့်​ ချ တတ်ေ...
70.2K 3.4K 7
အခုတင်​မဲ့ fic ​လေးက plus အခန်း​တွေပါလာနိုင်​တာမို့ အသက်​မပြည့်​ရင်​မဖတ်​ကြဖို့ ​မေတ္တာ ရပ်​ခံပါတယ်​
The Risk For "Our ......"
1.9K 172 1
Genre- Horror and Romance (yaoi) Main Cast- Luhan and Sehun Synopsis- About the suicides among teenagers because of ...... The series of those suicides struck terror into their parents. Then they looked for the reasons..................
80.5K 9.8K 19
အချစ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေး ရှိသလား??? Sequel to Love-Hate Relationship ~•~Second Chance~•~ SeHun LuHan ChanYeol BaekHyun Kim HyoJung (OC) Kim SeJung(OC)
Although He Is My Stepdad....
191K 14.9K 37
*အချစ်​ဆိုတာ သူနဲ့ကျွန်​​တော့်​ကြား မြူမှုန်​ကင်းတဲ့လမ်း​လေးအဖြစ်​ ရှိ​နေ​ပေးမယ်​ဆိုရင်​...* *အချစ်​ဆိုတာ သူနဲ့ကျွန်​​တော့်​ကြား လွတ်​လပ်​တဲ့ဇုန်​အဖြစ်​ ရှိ​နေ​ပေးမယ်​ဆိုရင်​* *အချစ်​ဆိုတာ သူနဲ့ကျွန်​​တော့်​ကြား စည်း​လေးမခြားပဲရှိ​နေ​ပေးမယ်​ဆိုရင်​...* *အချစ်​ဆိုတာ သူနဲ့ကျွန်​​တော့်​ကြား ဆိုးဝါးတဲ့အတိတ်​က​နေ မ​မွေ...
241K 18.5K 47
Wu Chanyeol ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် Wu Kris ဆိုတဲ့သူ့အကိုရဲ့ချစ်သူ Byun Baekhyun ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုချစ်မိသွားသောအခါ... တဇွတ်ထိုးဆန်တဲ့ Wu Chanyeol နဲ့ အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့ Wu Kris ဘယ်သူက Byun Baekhyun ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိမ့်မလဲ? ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရရင်တောင် အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရပါ့မလား? Baekhyun ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားဘယ...
The DEVILs (Animal)
498K 22.3K 25
RATED - M "Don't Tell No Lie... U Can't Deny... U Can't Run..... I Can Smell My Scent From U... Like Animal...." Every Parts Will Contain Rated parts...
Psycho spider Web (Chanbaek)
158K 17.6K 27
Myanmar ver: Type >> Yaoi Romance Angust Drama မုန်းစမ်းစိတ်ကြိုက် Park Chanyeol... ငါ့ဘေးကနေ ဘယ်တော့မှ ထွက်သွားခွင့်မပေးဘူး... ငါသေရင်တောင် ဝိညာဉ်အဖြစ် မင်းဘေးမှာ ရှိနေမှာ... • Baekhyun • ငါ့ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါ Byun Baekhyun • Chanyeol •
77.8K 8.7K 26
ချစ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုနှလုံးသားကိုရင်းနှီးကာ လူသတ်လက်နက်ဖြစ်စေတယ်.... #Chanbaek #Yaoi Start date>>1.2.2017 End date>>>10.4.2017
Colors Rainbow မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့ LGBT Short Story လေးပါ....